Dowladda Federaalka Oo Gurmad Ciidan Ka Dalbanaysa Wadamada Itoobiya iyo Uganda.
Sunday October 22, 2017 - 12:29:54 in Wararka by Super Admin
Hoggaamiyaha Dowlada Federaalka Soomaaliya Max'med Cabdullaahi Farmaajo ayaa socdaallo kaalma weydiisasha ah dhowaan ku tagaya wadamada Itoobiya iyo Kenya xilli Villa Somalia ay ku hadaaqeyso abaabulidda guluf dagaal.
Farmaajo ayaa lafilayaa in magaalada Addis Ababa uu kulan kula qaato madaxda ugu sarraysa dowlada Itoobiya wuxuuna ka codsan doonaa in melleteriga xabashida ee ku sugan Soomaaliya ay qaadeen olole dagaaleed hor leh oo ka dhan ah Xarakada Al Shabaab.
Ilo wareedyo lagasoo xigtay Villa Somalia ayaa xaqiijinaya in Farmaajo uu socdaal cagta kusoo marin doono wadamo ay kamid yihiin Uganda,Itoobiya iyo Jabuuti, socdaalka Farmaajo ayaa salka ku haaya sidii ciidamada dowladahaas gacan uga geysan lahaayeen duullaan ay xukuumaddiisu qorshaynayso in ay ku qaaddo magaalooyinka ay maamusho xarakada Al Shabaab.
Falanqeeyayaasha Melleteriga waxay saadaalinayaan in taageerada melleteri ee dowladahaas siiyaan Farmaajo aysan wax cusub kusoo kordhin doonin saaxada dagaalka Soomaaliya sababtoo ah kumanaan katirsan melleteriga Itoobiya iyo Kenya ayaa 10 sanadood Al Shabaab kula dagaallamaya Soomaaliya walina guul lataaban karo kamasoo hoyn dagaalka oo umuuqda mid waqtigiisu sii dheeraanayo.
Ciidamada Uganda ee saldhigyada ku leh deegaanno katirsan Sh/Hoose ayaa dhiig bax joogta ah oo ay kala kulmeen weerarada Al Shabaab waxay ku riixeen in ay isku aruuriyaaeen saldhigyo gaar ah mana awoodaan in ay ku lug lahaadaan dagaal hor leh.
Sidoo kale ciidamada Xabashida Itoobiya oo ah kuwa ugu awoodda badan soo duulayaasha Soomaaliya ku sugan uguna tirada badan iyana waxay gabeen dhaq dhaqaaqyadii melleteri oo ay sameynayeen, dhammaan ciidamada shisheeye ee Soomaaliya ku sugan dagaalka ugu ballaaran waxay ku bixiyaan sidii ay sahay isugu gudbin lahaayeen.
Ku dhawaaqistii dagaal kama dambeys ah ee Farmaajo ku dhawaaqay isbuucii lasoo dhaafay kadib qaraxii lagu hoobtay ee isgoyska Zoobe ayaa loo arkaa mid lagu degdegay oo aan laga fiirsan cawaaqib xumida maamulkiisa kasoo gaari karta.
Dagaal Warbaahinta laga sheego iyadoo aan la qaadin ayay khubarada melleteri u arkaan mid aan loogu talagelin guul lagasoo hooyo balse ah mid siyaasadeed oo waji iyo sumcad looga raadsanayo dowladaha reergalbeedka ee maalgeliya mashruuca loogu magac daray ladagaallanka Argagaxisada.
Dagaal Bishii September 2017 ka dhacay deegaanka Bariire ayaa lagu dilay ugu yaraan 95 askari oo katirsanaa Kuwa Baangaraafta loo yaqaan ee Mareykanku tababaray.
Dowladda Federaalka malahan ciidamo awood leh oo ubabac dhigi kara kuwa Xarakada Al Shabaab waxayna dowladdu ictimaaddaa awoodda ciidamada dowladaha gumeysiga ee dalka kusoo duulay.